ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌနှင့်အဖွဲ့၀င်များ စုံညီအစည်းဝေးကျင်းပ – ULAB Myanmar
Home ဆွေးနွေးပွဲများ ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌနှင့်အဖွဲ့၀င်များ စုံညီအစည်းဝေးကျင်းပ
21.10.2019 Demo ဆွေးနွေးပွဲများ 14
၂၁အောက်တိုဘာ၂၀၁၉(နေပြည်တော်) အောက်တိုဘာလ၂၁ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့၏ စုံညီအစည်းဝေးကို နေပြည်တော်၌ကျင်းပရာ
ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးဉာဏ်ဝင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်ဟိုး တို့စုံညီအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ ဝန်းထမ်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်မူဝါဒများ ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့၏ ရှေ့နေအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရန် အချက်အလက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။
၂၁ေအာက္တိုဘာ၂၀၁၉(ေနျပည္ေတာ္) ေအာက္တိုဘာလ၂၁ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႔၏ စံုညီအစည္းေဝးကို ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႔ဥကၠဌ ဦးဉာဏ္ဝင္းနွင့္ အဖဲြ႔ဝင္ ဦးေက်ာ္ဟိုး တို႔ စံုညီအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ဝန္းထမ္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းနွင့္ဆိုင္သည့္ မူဝါဒမ်ား ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႔၏ ေရွ႕ေနအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။
Previous article	ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး Next article	ကယားပြည်နယ်ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးပြု ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူရရှိနိုင်ရေး ဖရူဆိုမြို့တွင် အသိပညာပေးဆွေးနွေး
Sep 25, 2019 18
Jul 12, 2019 13
January 31, 2021 at 06:37
January 31, 2021 at 11:22
Hey there, You hɑve doneafantawtic job. I will certaіnly digg it and ρersonally sugɡest tⲟ my friends.
Here is myy website payday loans in ohio
May 11, 2021 at 14:12